Date My Pet » 5 Chipa Winter Date Ideas
Tis nguva yezororo Cheer, yechando kunakidza uye kupedza nguva nevadiwa. Kana uri mudzidzi akaita seni, uyo ari kutamburira kuti kunyange kutenga kutenga tishu, ipapo uri kutsvaka chando misi dziri kunakidzwa uye haangazvidembi kuputsa chikwama chako. Muri mhanza. Ava shanu dating pfungwa dziri chipa uye achaita kuchafadza ukama hwako zororo iri.
1. Ita gingerbread imba pamwe chete
Zvorudzi zvenyu zino, uye regai Sebaribari dzomoto dzinokwira pamwe pavakwe gingerbread imba. Ainetseka pamusoro kwokushaya kwenyu engineering matarenda? Yapinda risisipo, pane izvi zvikuru gingerbread Kits izvo zvinosanganisira zvose zvinhu zvaunoda, uye iri nyore kuverenga mirayiridzo papepa (vakawanda vavo kunyange kusanganisira mifananidzo). Kukudyira zvishoma pane $20, ari Kits dziripo dzimwe muzvitoro dzakawanda, ndege zvitoro, uye kunyange paIndaneti. Shongai dzimwe tunes mazororo uye vawane kuvaka! The nakisisa Chikamu vaungana chisikwa ichi dzinodyiwa chechipiri nokupwanya uye okuparadza naro pamwechete. Zvechokwadi chipikirwa zvokudya zvikuru uye nguva huru.
2. Hot chocolate, cuddles uye zororo firimu
Hapana rinobinha kuchitonhora akafanana inopisa zvokunwa uye romoto chido rudo. Hongu zvichida zvakare kwakanyanya. Zvandiri kureva ndezvokuti cuddling wako chaiye munhu uye kunakidzwa mukombe chocolate hot unogona kubaya mukati dzako kubva chilli yechando ekunze. Wedzera zororo firimu chaiwo akadai Elf, Zviri Hupenyu Anoshamisa, Home ndoga, Sei Grinch Akanyengedza Christmas kana A Christmas Story uye mukuru musi usiku. Kukudyira zvishomanana, unogona kuponesa mari apo kuva dzakapfuma munguva unhu uye pedyo waunoda.
3. Enda kuti usiku kufamba kuona vose vakanaka zviedza
Pamitambo Kushongedza tiri chikamu chinoita chando tsvarakadenga. Hazvinei kwaunogara, pangangova kuva muimba neimba, mugwagwa pashure mugwagwa wakazara pamwe nezviedza, zvishongo, nezvishongo zvose vachifara. Mirira kusvikira manheru uye ipapo famba keskusta kana munharaunda yako uye vanakidzwe kutarisa akanaka mazororo mwenje chinoishongedza (ona vangani avo makuru Inflatable urongwa yaungawana). Unogona kuita izvozvo rive mutambo kuburikidza voting iro imba ane yakanakisisa yezororo setup. kukudyira chinhu, ichi zuva nyore zvinogona nyore Penyesai ukama hwako.
Kushandisa jira echando tutira kukwira nemunhu wawaida vamwe adventures panze huru panze. Enda muchinjikwa nyika Skiing, Hiking kana chando shoeing yako mupaki kana trails. Nakidzwa kubhururuka pasi zvikomo uye reliving kwako pauduku ane zuva tobogganing. Kuvaka Snowman pamwe chete kana nhare dzokurwa kana kuenda Skating pagungano Outdoor chando Rink. Kukudyira zvishomanana, zvisikwa zvinogona kuva mumwe zvakanakisisa nhandare kuti ukama richibudirira.
5. DIY ounyanzvi
Indaneti rinonyomba zvisingaverengeki vakasununguka DIY yezororo raanoziva pfungwa uye mirayiridzo. Sarudzai nemudzimai anonakidza ndivo uye musoro kuti raanoziva chitoro kana kushandisa zvinhu iwe nhema vakakomba imba uye vawane manomano! Dai maiva kumbobvira kukuchidzira ounyanzvi uye rwokugadzira shure pachena chikoro, muyeuke kuti nguva dzose zvakanaka kuedza chinhu chitsva, uye budai aunenge wajaira. Kunze uchava mumwe wako mhosva kuti akubatsire kunze.
Ava shanu dating pfungwa dziri chipa, tsanzira uye ichaita nguva zvakanaka iwe nomudiwa munguva yechando mwaka uyu. Nakidzwa dzemazororo kunakidzwa ukama hwako.